Kuisa mari mukirabhu yegorofu: imwe nzira inobatsira kwazvo Ehupfumi Zvemari
Kuisa mari mukirabhu yegorofu: imwe nzira inobatsira kwazvo
Jose recio | | Entrepreneurs, makambani, Negocios
Kuva zvemakirabhu egorofu kunoita musiyano uye, sekureva kwevezvematongerwo enyika, zvinoyedzwa nenhengo dzavo kunzwa kuti havana kufanana nevamwe. Izvo zvinodiwa kuti uwane aya gumi nemaviri nzvimbo zvinosanganisira zvinyorwa zvekumirira, kurudziro kubva kune vamwe vanobatirana uye, pamusoro pezvose, yakagwinya yekutarisa account iyo inobvumidza iwe kuti ubhadhare zviyero izvo kusvika ku € 48.000 pamwe nemari yekupinda uye kubhadhara kwegore. Mhuri yehumambo uye vaimbove mapurezidhendi eHurumende inhengo dzinokudzwa dzevamwe.
Iyi imwe nzira yekudyara iyo inogona kubatsira zvakanyanya. Hazvishamisi kuti iwe unogutsa chido chako uye chinogona kuita yako nhengo mumakirabhu aya. Zvekuti mumakore mashoma ivo vagone kunatsiridza zvikamu zvakawanikwa munzvimbo dzemitambo idzi. Inoita bheji rekudyara iro mune zvese zviitiko rinotarisana nepakati nepakati, kwete panguva pfupi.
Vanhu vanosarudza kuita chero chiitiko mukirabhu pane kuzviita vega vanozviita kuti vazvipatsanure kubva kuboka revanhu uye vanzwe kuti havana kufanana nevamwe. Musiyano uyu unosara wakaratidzirwa nemakirabhu, uchisarudza nhengo dzawo nekuchaja mari yepamusoro yekunyoresa (pamusoro pe € 4.500) uye uchivaisa kumitemo yehunhu iyo, kune vakawanda vanhu, yavanotadza kusangana. Munzvimbo idzi zvakaoma kuti utambe tenesi kana usina kupfeka zvakanaka, zvinowanzorambidzwa kupinda mumba yekudyira kana lounges usina tie nejaketi uye zvinonetsa kugamuchirwa pakati penhengo dzayo kana iwe usina degree reyunivhesiti kana kubudirira mubhizinesi.
1 Gorofu kupfuura mutambo
2 Dzimwe nzira dziripo
3 Nhengo mumakirabhu epamusoro
4 Nebatsiro kwenguva refu
5 Mari yekupinda ndeye 9.000 euros
Gorofu kupfuura mutambo
Makirabhu akabudirira muSpain kubvira pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Mukutaura, ivo vaive mapea kana kuverenga nekutaurirana nzanga uko hunyanzvi nekukurukurirana kwaikurudzirwa. Pakazosvika pakati pezana ramakore, pasi pesimba reChirungu, vashoma nyanzvi mumitambo. Nhasi, iyo equestrian, polo uye gorofu makirabhu anoita mutsauko we chinzvimbo: kuzviita iwe haufanire kunge uine mari chete, asi nenguva.
Neichi chikonzero, avo vanogona kunyoresa kazhinji vane zvakafanana chimiro: murume, anopfuura makumi mana, muzvinabhizinesi, Executive kana akabudirira akasununguka nyanzvi kuti, pamusoro pezvo, anowanzo batirirwa parudzi urwu rwehupenyu hwemagariro uye, asingagutsikane nekuve wechikwata, anobhadhara fizi dzevazhinji: anogona kunyoreswa mune imwe kirabhu yemitambo uye imwe yemagariro; kana iwe unayo imwe kwaunogara uye imwe kwaunopedzera zhizha. Mavari anowanzo kuwana hwaro hwekumisikidza mubatanidzwa wezvemari uye kumisikidza mitsva yekudyidzana.
Dzimwe nzira dziripo
Izvo zvinodiwa kuti upinde zvakajairika kune wese munhu wese: bhara mari yekunyoresa (isingadzokeri mari), mugove (unogona kutengeswa kana uchinge wabva mukirabhu) kana kunyangwe zvese zviri zviviri, wozounzwa nenhengo dzinoverengeka uye unobvumidzwa ne bhodhi.
Barcelona Lyceum. Nhamba yevakabatana: 1.106. Antiquity: makore gumi nematanhatu. Mabasa makuru: yakagadzwa kupa mari kuvaka kweEl Liceo theatre. Iwe unogona kunzwa opera, kutora chikamu muhurukuro uye kuyemura hunyanzvi hwepfuma yemuzinda wayo. Mutengo: € 156 mari yekupinda uye € 4.500 pagore. Hupenyu hwemagariro: iyo yekudyira, inowanzoitirwa nevanoda opera. Matambiro pakutanga nekupera kwemwaka uye bato reCarnival. Kodhi yekupfeka: tai nejaketi.
Casino de Madrid. Kwete yevamwe: 1.900. Antiquity: makore 167. Iyo yakavambwa naDuke weOsuna. Mabasa makuru: colloquia, misangano, kuratidzira uye sangano rekufamba. Kubva 1999, ine nzvimbo yemitambo kumucheto kweMadrid. Mutengo: Mari yekupinda ye € 7.500 uye kubhadhara pamwedzi kwe € 60 kune vese vakaroora. Hupenyu hwemagariro: iyo Debutantes kutamba izvo izvo ivo protagonists vanopedza inopfuura mwedzi miviri vachidzidzira.
Nhengo mumakirabhu epamusoro
Kirabhu chairo de Polo de Barcelona. Nhamba yevakabatana: 9.600. Antiquity: makore 106. Kwaive kutanga kwevamwe vadzidzi veSpanish vakadzidza kuEngland uye, pavakadzoka, vakasarudza kusimudzira mitambo yemabhiza. Zvivakwa: chalet yemagariro, dziva rekushambira, jimi, maekisesaizi, makumi matatu nematatu matareti, matare mapfumbamwe echechi yetenisi, nhandare nhatu dzeHockey uye munda wepasi rose. Mutengo: iyo yekupinda muripo ndeye € 39 uye pamwedzi kubhadhara kwe € 15.000. Pane yekumirira rondedzero yekupinda. Hupenyu hwemagariro: Bhiriji uye masimba anobatanidza zvisungo pakati pevamwe Michato, kubhabhatidza kunoitwa ...
Santa Maria Polo Kirabhu, Sotogrande. Nhamba yevakabatana: 60. Zvivakwa: Kuvaka magariro, nhandare nomwe dzeporo uye chikoro. Vari kuvaka matare mana matsva, dziva uye mazana matanhatu "boxer”Zvemabhiza. Zuva rega rega zviri kuwedzera kuve mukurumbira nekuti pane mikana yekutamba nemapoka akaiswa pasina kuve neyako bhiza. Hupenyu hwemagariro: muzhizha kune zvakawanda zviitiko zvehukama kukurudzira kugarisana nevamwe vateveri veChirungu, Argentine neAmerica vanouya kukirabhu.
Puente Romano Tennis Kirabhu. Nha. Yevabatsiri: Yakatemerwa kwazvo. Ikozvino pane rondedzero yekumirira. Iyi kirabhu yakasimuka, muchimiro, kushandira maviri emhando yepamusoro mahotera muMarbella. Ndosaka zvichinetsa kupinda seshamwari. Mutengo: € 1.500 pagore. Zvinodiwa zvekupinda: kunyangwe parizvino pasina nhengo nyowani dzinogona kuitwa, chinodikanwa ndechekuti chiunzwe nenhengo mbiri, kuti munhu anoda mutambo uye kuti vazivikanwe semunhu akajairika pakurapwa kwavo, dzidzo uye nemanzwiro. Kodhi Kodhi: Yachena chena haidiwe, asi vanomitisa havabvumidzwe mutenesi, asi kwete kujimu.
Nebatsiro kwenguva refu
Kirabhu Chaiyo Jolaseta. Kwete yevamwe vanobatana: vanopfuura zviuru zvitanhatu. Zvivakwa: Makumi tenesi matareti, matare matanhatu epaseti yetenisi, matatu madziva ekushambira (imwe Olympic-saizi), hockey yemunda uye imwe ye roller hockey, yemukati mekutandarira mitambo, maviri epamberi, imba yekurovedza muviri uye chivakwa chekudyidzana chine nursery. Kupatsanurwa kwekuremekedzwa: muHockey ndiyo imwe yemakirabhu akakosha kwazvo munyika. Kunyangwe hazvo musimboti veJolaseta vane hunyanzvi mune tenesi, ikozvino padhaya tenesi nehockey ndiyo mitambo inosarudzwa nenhengo. Mutengo: tenga mugove unodarika € 6.000 uye ubhadhare muripo wepagore uri pasi pe € 30.000. Pfungwa yavo yakasimba: vane hombe padhadhi tenisi chikoro chevana muEurope.
Yechokwadi Kirabhu Pineda yeSeville. Kwete yevamwe vanobatana: vanopfuura mazana matanhatu ezviuru Chikamu chekugamuchira chakavharwa; Nhengo dzinoverengeka nyowani dzinopinda gore rega. Mutengo: € 6.000. Masevhisi akadai sekushandiswa kwejimimi ine mutariri anobhadhariswa zvakasiyana. Chido: vaimbova varoorani vanoramba vari vekirabhu, kunyangwe varambana nhengo yekutanga. Chimwe chinoshamisa, ine mujaho wayo, chimwe chinhu chisingawanzo kuwanikwa mune mamwe makirabhu.
Royal Tennis Kirabhu yeOviedo. Kwete yevamwe: 2.200 vanobata nemhuri dzavo. Ivo havabvume vakawanda vavanoshamwaridzana navo. Zera: makore 53. Kunyoresa mutengo: inopfuura € 12.000 isingadzokeri mari. Yakasarudzika enclave: iri pakati peOviedo. Kodhi yekupfeka: hunhu hunongodiwa chete kumapati enzanga akarongeka. Iwo ma lounges neresitorendi haasvikike mune zvekupfeka. Nhengo dzekuremekedzwa: Hake Royal Highness Muchinda Felipe de Borbón, Sabino Fernández Campo ...
Royal Nautical Kirabhu yePalma de Mallorca. Kwete yevamwe vanobatana: 1.840, pavari mazana mashanu chete vane chikepe. Mari yeiyo nhengo ndeye € 500 yekunyoresa uye € 4.800 pamwedzi. Ese masevhisi anobhadhariswa zvakasiyana. Zera: makore 15. Chinhu chinoshamisa: ine kwaya uye mimhanzi dzidziso makirasi anopiwa. Iyo yakasarudzika: ndiyo kirabhu yakanyanya kushanyirwa neRoyal Family, iyo pamwe chete nevaimbove mapurezidhendi ehurumende nenhengo vanga vaine kirabhu kweanopfuura makore makumi mashanu, inhengo dzayo dzinokudzwa kwazvo.
Mari yekupinda ndeye 9.000 euros
Aeroclub yeSantiago de Compostela. Huwandu hwevadyidzani: 2.200 varidzi, pane avo vangangoita mazana maviri vanhu vanobhururuka. Iyo kirabhu yakazvarwa sesangano reaeronautical muna 200, asi nhasi yave yakawanda yekirabhu yegorofu. Vanhu vanopinda mairi, pamusoro pezvose, zvemutambo uyu uye netennis. Mutengo: iyo yekupinda muripo ndeye € 1935 pamhuri unit; uye iyo inobhadharwa pamwedzi ye € 9.000. Zvekudyidzana: chess, kuungana kwevanhu uye madomino chikamu chakakosha kwazvo chehupenyu hwezuva nezuva hwekirabhu. Manuel Fraga, aimbova purezidhendi weXunta, aigara achiuya kuzotamba mitambo yake yemasimba pano. Strong poindi: mitambo yemitambo zvikoro zvevana nemapato avanoronga kusimudzira hukama hwehukama pakati penhengo.
Royal Nautical Kirabhu yeBarcelona. Iyo dock ine 175 maberths echachts anosvika kusvika makumi mana emamita pakureba uye nenzvimbo inozivikanwa yenzvimbo. Zvivakwa: jimu uye sauna, raibhurari, tara yakatarisana neguta, dzimba dzemisangano, yekupaka yega uye makamuri ekudzidzira. Mitengo: kubva ku € 40 kunyoreswa uye mudiki pamwedzi mubhadharo. Sevhisi inobhadharwa zvakasiyana.
Dehesa Montenmedio. Ine 25 bungalows nemhando dzose dzeumbozha. Zvivakwa: inokwanisa dzimba dzinosvika chiuru nemazana mashanu emabhiza, ese anochengeterwa kugara kwakazara, mumabhokisi akasimbiswa akavakwa muDhehesa imwechete. Iyo zvakare ine mota paki yekumisa mazana mana marori kana mataera. Mutengo: kutasva bhiza kunogona kukwira kubva ku € 1.500 kusvika ku € 400.
Royal Nautical Kirabhu yePalma de Mallorca. Nha. Yevamwe: 1.840, pavari mazana mashanu chete vane chikepe. Mari yekuve nhengo iri € 500 yekunyoresa uye € 4.800 pamwedzi. Ese masevhisi anobhadhariswa zvakasiyana. Zera: makore 15. Chinhu chinoshamisa: ine kwaya uye mimhanzi dzidziso makirasi anopiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » Kuisa mari mukirabhu yegorofu: imwe nzira inobatsira kwazvo
Nokia Gamesa inodonha pamusika wemasheya
Hutungamiri hweBBVA inopomerwa huwori: ichaita sei pamusika wemasheya?